Zvimwe kudiwa mu e-commerce nevashandisi | ECommerce nhau
Zvimwe zvinodiwa mue-commerce nevashandisi
Zvemagetsi zvemabhizimusi zvakanyoresa kuwedzera kwe12,5% ​​zvichienzaniswa negore rapfuura nekuda kwezvirambidzo zvekufambisa zvinokurudzirwa neMutungamiriri mumazuva achangopfuura ne dambudziko recoronavirus. "Kuita uku kunodzivirira kufamba kwevanhu, uye nekudaro kunodzora mikana yekutapukira," akadaro purezidhendi weUNO logistics mushandirwi, Francisco Aranda, ndokuwedzera kuti "sesangano rebhizinesi, tinokumbira kuti kwete kana kufamba kwezvinhu inorambidzwa ”.
UNO yakaburitsa, pamwe chete neComisiones Obreras (CCOO) uye UGT, gwara chairo remazano enzvimbo yezvinhu nekutakura zvinhu. Iri igwaro rine kurudziro yekudzivirira iyo coronavirus kana kuita mune yeavo vakanganiswa. Chinangwa chechinyorwa ichi "kupa kudzikama, kujekesa, kuenzanisa zviito uye kufambisa kubatana kwekambani nevashandi," UNO yakaratidza.
Iko kune mamwe matunhu anopa kudiwa kukuru kupfuura mamwe nevatengi. Mumamiriro ezvinhu anogona chaizvo kuchinja nekufamba kwemazuva kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti rimwe rematambudziko anogona kugadzirwa mushure meiyi kukwira kwekudiwa kwevashandisi nderekuti pakupedzisira inogona kuburitsa kushomeka uye, zvichidaro, alarm yekudyidzana isina basa.
1 Kudiwa mukutengeserana kwemagetsi: chii chinopa mushandisi?
2 E-commerce kugona mukati menguva dzenjodzi
3 Kufananidza kwemitengo yepamhepo
4 Kuderera kweupfumi kukura
Kudiwa mukutengeserana kwemagetsi: chii chinopa mushandisi?
Hapana mubvunzo kuti chinodikanwa mukutengesa zvemagetsi nevashandisi chinokurudzirwa nekudiwa kwevatengi kuti vave nezvakawanda zvezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvisingakwanise kuendeswa mazuva ano kuburikidza nenzira dzechinyakare mukutengesa kwavo. Mukati meichi chirevo chizere, zvakafanira kukurudzira zvakanakira izvo makambani aya anogadzira pakati peveruzhinji.
Imwe yeakanyanya kukosha kuwana zvigadzirwa zvisingakwanise kutengwa se zvitoro kana zvitoro zvinovharwa nekuda kwemitemo mitsva yekusiyanisa yakaitwa munyika medu. Semuenzaniso, mukutenga nharembozha, zvinhu zvine chekuita netekinoroji nyowani, zvipfeko kana zororo uye mabasa ekudzidzisa, pakati pezvimwe zvakakosha. Uye izvo zvinotakura zvinopfuura imwechete mukana kuendesa rudzi urwu rwekutengesa mune yepamhepo fomati. Kufanana neaya atichafumura kubva zvino zvichienda mberi:
Kuti ukwanise kuihaya nekukurumidza kubva kumba kwako uye kuburikidza nenzira yakapusa pakuita kwayo.
Inowanzo gadzira mitengo yekukwikwidza kupfuura kubudikidza neyechinyakare kana yakawanda nzira dzechivanhu dzinogona kubatsira vatengi kana vashandisi kuchengetedza mari yakawanda kubva pakutanga kwayo.
Zvekufambisa kwayo, zvinongodiwa kuti uve necomputer yako kana chero mhando yezvigadzirwa zvetekinoroji kuti iwe ugone kuda chigadzirwa, sevhisi kana chinhu kubva ikozvino.
Ivo vanogoneswa kuburikidza nenzira dzakasiyana dzekubhadhara, senge kiredhiti kana madhibhiti makadhi, emagetsi kubhadhara kana kunyangwe aine chaiwo mari senge Bitcoin.
Uye pakupedzisira, usakanganwa kuti izvi zvekutenga pamhepo zvinofanirwa kuve nezvose zvivimbiso zvekuchengetedza mashandiro kana kufamba kwevatengi kana vashandisi.
E-commerce kugona mukati menguva dzenjodzi
Ichi chingave chikamu chinogona kudzikamisa munguva dzenhamo dzakakomba dzehupfumi. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kugadzira iyo kukosha nhevedzano kuti zviri nyore kwazvo kuti uzvitorere kubva panguva ino chaiyo. Semuenzaniso, kuburikidza nezviito zvinotevera zvatiri kuzokuratidza pazasi:
Kunyangwe hazvo kudiwa kwawanda, hazvisati zvanyatsojeka kuti ruzhinji rwemakambani anogamuchira aya maodha achakwanisa kuugutsa. Izvi zvinodaro nekuti mutengesi mukuru wezvinhu zvakagadzirwa uye zvigadzirwa iChina, nyika inonyanya kukanganiswa uye inotangisa iyo coronavirus.
Nepo kune rimwe divi, iri chikamu chinokwanisa kukunda semhedzisiro yenguva yemahara pane chikamu chevashandisi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kutendwa kuti kuwedzera kwenguva yemahara muhuwandu inomanikidzwa kugara pamba kuri kuburitsa a kuwedzera kushandiswa kwemasevhisi epamhepo uye kurodha mutambo wevhidhiyo. Ndiyo imwe yedzenzira dzavari kushandisa kutora maawa ekuzviparadzanisa uye kuwana zororo. Nenzira iyi, zvitoro kana mabhizimusi epamhepo anopa zvigadzirwa izvi anogona kubatsirwa kubva muchiitiko ichi, sezviri kuitika panguva ino nekupararira kwecoronavirus.
Mukati meichi chiitiko chakakosha uye chakaomarara panguva imwe chete, hapana mubvunzo kuti panguva ino zvinogona kutaurwa kuti chokwadi chekuti maguta mazhinji ari ega uye kune zvirambidzo pakufamba, iri kuburitsa mukana wekupa online kubva kumba . Iine imwe nzira yekuzorora uye yekudzidzira yakakura kwazvo kupfuura mune dzimwe nguva munhoroondo.
Kufananidza kwemitengo yepamhepo
Mupfungwa iyi, huwandu hwakajeka kuratidza kuti vapfumbamwe pagumi vatengi vanoenzanisa mitengo online vasati vatenga chigadzirwa. Izvi zvinoratidzwa neongororo yakaitwa yakakosha inishuwarenzi muenzanisi pachiitiko che Zuva revatengi. Chirongwa chinoitwa chero Kurume 15 uye iyo kambani yakashandisa kujekesa mimwe mibvunzo nezve maitiro ekushandisa evaSpanish.
Kunyanya, 93% yezvidzidzo zvakabvunzwa zvakataura kuti vanoongorora mitengo pamhepo pavanoronga kutenga chigadzirwa chitsva. Uye zvakare, vangangoita zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveavo vanoita, vanopedzisa kutenga pamhepo. Icho chinangwa chiri nyore: kuwana ruzivo uye kudzikisa mutengo. Uye ndiko kuti kuenzanisa kunotipa iwo mukana wekuponesa kusvika makumi mashanu muzana pane mamwe masevhisi. Iyi ndiyo kesi, semuenzaniso, yeinishuwarenzi yemotokari, asi kwete iyo yega.
Kwete chete iyo mukana wekutenga mune online fomati ndiko kwakatangira iyi sarudzo yemunhu pachayo kune vashandisi kana vatengi. Kana zvisiri, pane kudaro, chiito chinogutsa zvishuwo zvechikamu chakanaka chevanhu ava chekudyidzana nevatengi chikamu. Kusvikira pakuti inogona kududzirwa kuti ndiwo maitiro ari kukwira mumakore achangopfuura uye kuti haisisina kudzoka mumakore anotevera. Sezvinoratidzwa mune dzichangoburwa chikamu chekambani, izvo zvinopa mushe mushe wekuti maitiro aya achange ari sei kubva zvino zvichienda mberi, kunyanya mumakore maviri kana matatu anotevera
Kuderera kweupfumi kukura
Mukati meichi chiitiko mune zvemagetsi zvekutengeserana parizvino zviri kufamba, zvakafanira kuti utarise kuti coronavirus ingakanganisa sei zviitiko zvehupfumi padanho repasi rose. Nekuti zviriko, uye kwenguva iyo mamiriro akachengetedzwa neakasiyana ehupfumi uye emari vamiririri ndeyekuti hutachiona kuputika kunoderedza kukura kweGDP kweChina nekukomberedza 0,3% gore rino, kusvika 5,6% uye pasirese kutenderedza 0,15%, kusvika 2,6% kana 2,5 %. Nekudaro, mamiriro acho anogona kuve akaomarara zvakanyanya kana iyo coronavirus isingakwanise kuwanikwa mumazuva anotevera. Mupfungwa iyi,
Asi zvinopesana, iyo yemagetsi commerce inomiririrwa nezvitoro kana online online commerce inogona kubuda ine yakasarudzika simba mune yazvino yekubatana nguva. Nekuti iwo maguta mazhinji ari kuzviparadzanisa uye pane zvirambidzo pakufamba, iri kuburitsa huwandu mukupa online kubva kumba. Semuenzaniso, nezvigadzirwa kana masevhisi ane hukama zvakanyanya nezororo uye kudzidziswa. Kusvika padanho rekuti ivo vaone kutengesa kwavo kuri nani mumwedzi iyi yakaoma kune vese vashandisi.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti mukati meapi ari iwo maitiro anozoratidzira ramangwana rezvigadzirwa zvemagetsi mumakore anotevera, chikamu ichi chakakosha muhupfumi hwenyika yose chave chishoma pane chakakosha kubvira kutanga kwekutengesa online pamakore makumi mapfumbamwe kusvika nhasi. . Nenzira inofambira mberi uye kusimbisa hwaro hwayo mukati meiyi chikamu chebhizinesi. Kunyangwe paine maburi aanogadzira panguva ino uye anonzwisisika nenyanzvi.
Pazvinofanirwa kuratidza kuti kunyange hazvo kudiwa kwawanda, hazvisati zvanyatsojeka kuti ruzhinji rwemakambani anogamuchira aya maodhi achakwanisa kuugutsa. Izvi zvinodaro nekuti mutengesi mukuru wezvinhu zvakagadzirwa uye zvigadzirwa iChina, nyika inonyanya kukanganiswa uye inotangisa iyo coronavirus. Kubva pane ino maonero, haina njodzi kune zvingangoitika mhedzisiro iyo inogona kuve pahupfumi hwenyika kubva munaKurume uno. Asi kune rimwe divi, inopa hukuru hwakakura mumabhizinesi ayo kupfuura mune mamwe akajairika kana echinyakare zvikamu. Kusvika kune icho icho chingave chiri chaicho bhizinesi mukana mune mazhinji mamiriro. Sezvinoratidzwa mune dzichangoburwa chikamu chikamu mishumo yakaratidzirwa mumwedzi ichangopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Zvimwe zvinodiwa mue-commerce nevashandisi
Mutero nemabhizimusi emagetsi
Kubatsira kwekutenga pamhepo